အင်တာနက် ကောင်းမွန်တိုးတက်ရေး - ၂ - MYSTERY ZILLION
အင်တာနက် ကောင်းမွန်တိုးတက်ရေး - ၂
ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့တတွေ ဘာဆက်လုပ်ကြမလဲ။ ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဆိုပြီး ထိုင်နေလို့ကတော့ ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်။ ဒီထက်ပိုဆိုးလာဖို့ပဲရှိပါသည်။ လုပ်လို့ရတာတွေထဲက လုပ်သင့်တာလေးတွေကို ခပ်မှန်မှန်လေး လုပ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ တချိန်ချိန်မှာ သက်သာတဲ့စျေးနှုန်းနဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ Connection ကို ကျွန်တော်တို့ ပိုင်ဆိုင်နိုင်လိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်မိပါသည်။ လုပ်သင့်တာလေးတွေကတော့ ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ အဖွဲ့အစည်းလေးတွေ ဖွဲ့သင့်သည်။ ဥပမာ Facebook တွင် ဖွဲ့ထားတဲ့ CDMA 800 EVDO Users ကဲ့သို့ေသာ အဖွဲ့အစည်းေလးများဖြစ်သည်။ CDMA User များတင်မဟုတ်ဘဲ၊ ADSL User . . WiMax User . . . စသည်ဖြင့် မိမိအသံုးပြုတဲ့ Service နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Network လေးတွေပြုလုပ်သင့်ပါသည်။ ပြီးတော့ အဲဒီ Network လေးတွေကနေ နိုင်ငံရဲ့အရေးပါအရာရောက်တဲ့ ပုဂ္ဂိုထံ တောင်းဆိုမှုများ ပြုလုပ်ဖို့လိုပါသည်။ ဥပမာ သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်ထံ လက်မှတ်ရေးထိုးတောင်းဆိုမှုများကို ဦးဆောင်သူ၏ စီစဉ်မှုဖြင့် Network အတွင်းရှိသူများက ပုံမှန်ပြုလုပ်နေသင့်သည်။ ထို့ပြင် Connection ကောင်းမွန်ရေးအတွက် ဆွေးနွေးအကြံပြုချက်များကိုလည်း မျှဝေပေးကြဖို့လိုပါသည်။ ယခုကဲ့သို့ တောင်းဆိုမှုများရှိလာလျင် ခိုင်မာသော နာမည်ရ ဂျာနယ်၊ မဂ္ဂဇင်းများက ၎င်းတို့ထံတွင်ဖော်ပြပေးသင့်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် နာမည်ရဂျာနယ်၊ မဂ္ဂဇင်းများ၏ သတင်းအချက်အလက်များကို အများပြည်သူသာမက သက်ဆိုင်ရာမှ လူများကိုယ်တိုင် ဖတ်ရှုကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ နောက်တစ်ချက်က မြန်မာနိုင်ငံတွင် အင်တာနက်သုံးစွဲမှာ လူဦးရေ၏ ၁% တောင်မရှိသောကြောင့် Network များ၏ လှုပ်ရှားမှုကို အများပြည်သူထံ ပိုမိုပျံ့နံ့ပြီး ပူးပေါင်းပါဝင်လာစေရန် ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် လူတစ်ရာမှာ ၁ ယောက် ၊ တစ်ယောက်မှာ တစ်ဝက်က ချက်တင် . . . လို့ဆိုရမည့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အင်တာနက်သုံးစွဲသူနှင့် ၎င်းတို့၏ သုံးစွဲမှုအဆင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန် လုပ်ဆောင်ပေးရန်မှာလည်း ကျွန်တော်တို့ တာဝန်ပင်ဖြစ်သည်။ သို့မှသာ အင်တာနက်သုံးစွဲသူများသည် နိုငငံတကာအမြင်ရှိလာပြီး နိုင်ငံတကာတွင် ဖြစ်ပေါ်နေသောစျေးနှုန်း၊ နိုင်ငံတကာတွင် ရရှိနေတဲ့ Bandwidth များဖြင့် အင်တာနက်ကို အသုံးပြုချင်စိတ် ဖြစ်ပေါ်လာမည်ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် သန့်ရှင်းသောအစိုးရ နှင့် ကောင်းမွန်သောအုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်နေသည်ဟု ကြွေးကျော်နေချိန်တွင် ကျွန်တော်တို့သည်လည်း ကောင်းမွန်သော Connection နှင့် သက်သက်သော လစဉ်ကြေးများဖြင့် အင်တာနက်အသုံးပြုနိုင်ရေးကို ဝိုင်းဝန်းကြိုးစားသင့်ပေသည်။ စုပေါင်းညီညာ၊ အောင်ကြောင်းဖြာ ဆိုသည့်စကားအတိုင်း ကျွန်တော်တို့တတွေ စုပေါင်းကြိုးစားကြမည်ဆိုလျှင် အောင်မြင်မှုကို ရရှိမည်မှာ အသေအချာပင် ဖြစ်ပါတော့သည်။
<a href="http://www.winmyotun.co.cc/2011/05/blog-post_12.html">မူရင်း Post သို့</a>